Puntland oo Somaliland uga Digtay Shidaal-baarista Sool – Radio Daljir
Diseembar 10, 2015 5:50 b 0
Somalia, December 10, 2015-(Daljir)_ Ugu yaraan saddex diyaaradood oo nooca qumaatiga u kaca ah ayaa beryahaan dul heehaabay deegaamada Awr-boogays, Sarmaanyo iyo God-aalo oo dhammaan katirsan gobolka Sool, xilli maamulka Soomaaliland uu sheegay inuu shirkado shisheeye u ogolaaday inay gobolka Sool shidaal ka baaraan.
Qaar kamida dadka deegaanka ayaa u xaqiijiyey warbaahinta in diyaaraduhu ay kusocdaan joog hoose ayna mararka qaar ku degayaan dhul buuraleey ah walow aysan wax xiriir ah lasamayn dadka kunool deegaamadaasi.
Cabdicasiis Cabdirashiid Axmed oo kamid ah dhalinyarada kunool deegaanka God-aalo ayaa sheegay in saaka ay dadka reermiyiga ah u sheegeen in diyaaraduhu ay kudegeen meel buuraleey ah, ayna halkaasi kusugnaayeen dad Soomaali ah oo wata gaadiid dhulka ah, ayna Israsaasayni kudhexmartay ayna carareen.
Goob joogahaan ayaa sheegay in meeshii ay tageen ay ku arkeen qalab ay kooxdaasi u adeegsanaysay shidaal iyo macdan baaris, wuxuuna xusay inay xiriir laleeyihiin maamulka Soomaaliland oo doonaya inuu halkaasi shidaal iyo macdan ka baaro.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda Puntland Maxamuud Xasan Soocade ayaa sheegay inaysan aqbali doonin guuda ahaan tallaabooyinka daandaansiga ah ee maamulka Hargeysa uu ku doonayo inuu shidaal uga baaro dhulka Puntland.